HomeWararka CaalamkaHelitaanka Basaboorka Sweden oo Wax ka badal lagu Sameeyay Mudada lagu Helayo
May 21, 2022 Wararka Caalamka, Wararka Maanta, Wararka Sweden, Warka ugu akhriska badan 0
Iyadoo booliska Sweden ay kordhiyeen waqtiga kama dambaysta ah ee codsiga baasaboorka si loo xalliyo dhibaatada waqtiyada dheer ee sugitaanka, dhibaatada farsamo ee soo food saartay shirkadda daabacaadda baasaboorka ayaa laga yaabaa inay dib u dhigto bixinta baasaboorka ka dib.
“Maanta waqtigu waa 20 maalmood, xaaladaha ugu daranna waa ay laba jibaarmi kartaa,” ayuu yiri sarkaalka qaabilsan baasaboorka ee booliiska, Per Engstrom.
Shirkada Baasaboorka ku daabacda dalka Finland ayaa waxaa soo wajahday cilad farsamo oo soo wajahday mid ka mid ah mashiinada wax soo saarka. Waa isla shirkaddii qandaraas kula gashay dalal badan oo Yurub ah. Wadamada qaar ayaa sidoo kale la ildaran waqtiyo sugitaan oo dheer taaso ay sabab u tahay baahida badan ee safarka kadib masiibada Corona.
“Waxaan helnay dammaanad ah in wax soo saarku diyaar noqon doono usbuuca soo socda,” ayuu yiri Engstrom. Baasaboorka Iswidishka ayaa mar kale la daabici doonaa.
Wafti ka socda booliska dalka Sweden ayaa todobaadkan booqasho ku tagay xarunta shirkadaasi ee ku taal dalka Finland si ay faahfaahintooda u soo arkaan.
Dhanka kale, booliisku waxay rumeysan yihiin in waqtiyada dheer ee sugitaanka ballanta lagu cusboonaysiinayo baasaboorka ay yaraan doonaan labada toddobaad ee soo socda.
“Waxaan si weyn u soo gaabinnay safafka dhowr toddobaad, waxaana aragnaa in xaaladdu ay ka fiicnaan doonto labada toddobaad ee soo socda,” ayuu yiri Engstrom.
Engstrom ayaa ugu baaqay dadka socotada ah in ay qaataan kaarka aqoonsiga qaranka halkii ay ka qaadan lahaayeen baasaboorka, maadaama uu sharci yahay in lagu safro gudaha Midowga Yurub